U diyaargarowga Guusha Suuqgeynta 2017 | Martech Zone
In kasta oo xilliga kirismaska ​​laga yaabo inuu si wanaagsan u socdo, iyada oo xafladaha shaqaalaha loo qoondeeyey iyo waxyaabaha yaryar ee sameeya wareega xafiiska, waqtigan sidoo kale waa waqtigii laga fakari lahaa kahor 2017 si loo hubiyo in 12 bilood ka dib, suuqleyda ay u dabaaldegi doonaan guul ay arkeen. In kasta oo CMO-yada dalka oo dhami ay si fiican u neefsan karaan niyadda ka dib tartan adag oo 2016 ah, hadda maahan waqtigii lagu qancin lahaa.
Sanadkii la soo dhaafey, waxaan aragnay shirkado waaweyn oo teknolojiyad ah oo kala duwanaanaya waxyaabaha ay bixiyaan, sida UberEats, Amazon dukaamada buugaagta iyo Apple jeexjeexa daloolka dhagaha, oo dhammaantood ku qasbay ganacsiyada inay ka fekeraan sida ay iyaguna u horumarin karaan. Liiska sare ee mowduucyada looga hadlay waxay ahaayeen Xaqiiqda Virtual, otomaatiga iyo anshaxa bilowga ah ee looga hortagayo caadada.
Ka dib go'aannadan ganacsi ee aadka u sarreeya iyo isbeddellada cusub, hoggaamiyeyaasha ganacsiyada ayaa lagu qasbay inay su'aal ka keenaan nooca isbeddelka ay tahay inay sidoo kale ka fekeraan. Hadda waxaa la joogaa waqtigii ay ganacsatadu ka fiirsan lahaayeen tallaabooyinka ay tahay inay qaadaan si loo hubiyo in khibrad macaamiil-barte u ah 2017.
Macaamiilku waa Fure
Haddii go'aannada ganacsi ee ay qaateen noocyada waaweyn ay na tuseen wax uun sannadkan, waa in macaamilku fure yahay. Ugu horreyntii, ugu horraynba, suuqleyda ayaa gabi ahaanba waa inay lahaadaan maskaxdan maalgashi kasta oo 2017. Waxay u baahan yihiin inay ka fekeraan waxa ay ka kooban yihiin macaamiishooda, waxa ay inta badan la falgalayaan, iyo laga yaabee tan ugu muhiimsan, sida ay u jeclaan lahaayeen inay helaan waxyaabahaan. Markaad fiiriso sida ay ula xiriiri karaan macaamiishooda si fiican, ganacsigu wuxuu u taagan yahay inuu kasbado tiro badan.
Ka Dhigista Mobilka Mudnaan
Sida kaliya ee loola macaamilayo macaamiisha maanta waa iyada oo lala gaaro habab ay u isticmaalaan si joogto ah. Iyadoo 80% dadka waaweyn ee UK ay leeyihiin a casriga ah Maaha wax lala yaabo in ganacsiyada badankood tani ay tahay aalad muhiim ah oo lagu gaaro isticmaalahaaga ugu dambeeya. Si kastaba ha noqotee, waan ka naxnay markii aan helnay dhawaanahan Qaswadayaasha Dijital ah ku warbixi in 36% ganacsiyada aysan wali heysan degel internet. Hadda waa waqtigii ay suuqyayaashu hubin lahaayeen in aysan ku dhaafin iyaga oo ku guuldareystay inay bixiyaan ikhtiyaari moobil ah, halka kuwa horey u haystay barta moobiilku ay tahay inay hubiyaan in bixintoodu ay tahay sida ugu macquulsan ee ugu macquulsan.
Goob guurguura waa in loola dhaqmaa isla muhiimadda ay leedahay barta desktop-ka. Waa inuu ahaadaa mid sahlan in lala socdo, oo leh dhammaan astaamaha laga helo desktop-ka, waana inaysan noqon mid isku dhex yaacsan ama adag in la dhaqaajiyo. Tani waxay u baahan tahay menus la iska beddeli karo, astaamo, iyo baararka qalabka wax lagu farxo ee isha lagu farxo. Waxyaabahani waxay u baahan yihiin in lagu waafajiyo qaab macquul ah iyo luuqad kooban si goobta mobiladu u muuqato mid wax ku ool ah, laakiin sidoo kale waa la shiidi karaa.
2016 ayaa tuurtay tiro badan oo tiknoolajiyad cusub ah iyo isbeddellada habka aan ganacsiyada u tixgelin lahayn. Si kastaba ha noqotee, u guuritaanka sanad cusub, suuqleyda waa inay ka taxaddaraan inaysan maalgashi ku sameyn tikniyoolajiyadda dartiis. Wixii 36% ah ee sheegay in our Qaswadayaasha Dijital ah Warbixinta ay aaminsan yihiin in ganacsigooda uu u baahan yahay inuu maalgashi dheeraad ah ku sameeyo dijitaalka si loo cusbooneysiiyo, waxaa muhiim ah in maalgashiyadan la sameeyo ka dib cilmi baaris dhameystiran marka ganacsigu leeyahay xirfadaha lagu kordhin karo maalgashigaas oo kaliya marka kiis dhab ah oo adeegsi la go'aaminayo.
Soo Degso Warbixinta Qalalaasaha Dijital ah
Caqligan la'aan, ganacsigu wuxuu halis ugu jiraa inuu lacag ku lumiyo wax aysan awood ugu lahayn guriga inay ilaashadaan. Tusaale ahaan, 53% suuqyada qirto inaad ku dhibtooneysid inaad adeegsato softiweerka otomatiga suuq geynta wixii ka dambeeya maalgelinta hore. Intaas waxaa sii dheer, dalabka macaamilku waa inuu jiraa. Haddii aysan dan ka lahayn qaadashada tikniyoolajiyad cusub si ay ula falgalaan astaantaada, waxay noqoneysaa maalgashi khasaaray.
Si loogu galo 2017 istiraatiijiyad dhijitaal ah oo xoog leh, suuqleyda waxay u baahan yihiin inay tixgeliyaan dhammaan qodobbadan. Ku haynta macmiilka udub dhexaadka go'aannada oo dhan, iyadoo si joogto ah loo qiimeynayo qiimaha ay isbeddelada cusub iyo teknolojiyaddu keeni karaan, waxay ka dhigan tahay in shirkaduhu ay xiriirro adag la yeelan karaan adeegsadahooda ugu dambeeya, ugu dambayntiina xoojinayaan daacadnimada astaanta.
Tags: 20162017CustomerSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkauk
20, 2016 at 9: 57 PM
Qoraal Cajiib ah! Waad ku mahadsantahay wadaagista.